ဒီလူငယ်တွေဟာ တစ်ချိန်ချိန်ကျရင် ကမ္ဘာ့အဆင့်ကို တက်လှမ်းဖို့ ပြင်ဆင်နေသူတွေပါ
1 Nov 2018 . 4:31 PM
အခုနောက်ပိုင်း မော်ဒန်ဘောလုံးလောကမှာ ရေစီးကြောင်း ပြောင်းလဲလာခဲ့ပြီး နာမည်ကြီး ကစားသမားတွေထက် အရည်အသွေးမြင့် လူငယ်ကစားသမားတွေက နေရာပိုယူလာကြတယ်။ ရာသီတိုင်းမှာ ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ လူငယ်ကစားသမားတွေ အမြဲလိုလိုထွက်ပေါ်လေ့ရှိပြီး ဥရောပထိပ်သီးအသင်းမှာ ကစားနေတဲ့ လူငယ်လေးတွေအတွက် ပုံမှန်ကစားခွင့်ရဖို့ဆိုတာက ကြီးမားတဲ့ စိန်ခေါ်မှုပါပဲ။ ဒီရာသီ ဥရောပထိပ်သီးလိဂ်တွေမှာ နေရာအလိုက် ခြေစွမ်းပြနေတဲ့ အသက်(၂၃)နှစ်အောက် ကစားသမားတွေကို နာမည်ကြီး sportskeeda.com က ရွေးချယ်ခဲ့တာကို Akhayar Sports ပရိသတ်တွေ သိရှိနိုင်အောင် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ် . . . .
ဂိုး – လာဖွန့် Alban Lafont (ဖီအိုရင်တီးနား)
အသက် (၁၆)နှစ်အရွယ်ကတည်းက တူးလူးအသင်းအတွက် ပွဲထွက်ကစားခွင့်ရခဲ့ပြီး ပြင်သစ်လီဂူးရဲ့ အသက်အငယ်ဆုံး ဂိုးသမားအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရသူပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီ အပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်မှာ ဖီအိုရင်တီးနားအသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တဲ့ လာဖွန့်ဟာ ဥရောပရဲ့ အကောင်းဆုံး လူငယ်ဂိုးသမားတွေထဲမှာ တစ်ဦးအပါအ၀င် ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တန်း – လူးကပ်စ်ဟာနန်ဒက်ဇ် Lucas Hernandez (အက်သလက်တီကို)
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားတုန်းက ပြင်သစ်အသင်းနဲ့အတူ ခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့ ဘယ်နောက်ခံလူ လူးကပ်စ်ဟာနန်ဒက်ဇ်ဟာ အသက်(၂၂)နှစ်အရွယ်သာ ရှိသေးလို့ နောက်ထပ် အများကြီးတိုးတက်လာဦးမယ့် အနေအထားပါပဲ။ သူ့ရဲ့ခြေစွမ်းကြောင့် အက်သလက်တီကိုနည်းပြ ဆီမြွန်နီ Diego Simeone ဟာ ဘယ်နောက်ခံလူအဖြစ် ဟာနန်ဒက်ဇ်ကို သုံးရမလား၊ ဖိလစ်ပီလူးဝစ် Filipe Luis ကို ဦးစားပေး အသုံးပြုရမလားဆိုတာ ခေါင်းခဲနေရတယ်။
နောက်တန်း – ဂျိုးဂိုးမက်ဇ် Joseph Gomez (လီဗာပူးလ်)
၂၀၁၅၊ အောက်တိုဘာလတုန်းက ပြင်းထန်တဲ့ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့လို့ ကာလအတော်ကြာ အနားယူခဲ့ရပေမယ့် ဂိုးမက်ဇ်ဟာ ပြင်းထန်တဲ့စိတ်ဓာတ်၊ မလျော့သော ဇွဲလုံ့လတို့နဲ့အတူ ပြန်လာနိုင်ခဲ့တယ်။ အသက်(၂၁)နှစ်သာ ရှိသေးပေမယ့် အသက်နဲ့မလိုက်အောင် ခြေစွမ်းပြနေတဲ့ ဂိုးမက်ဇ်ဟာ လီဗာပူးလ်အသင်း ခံစစ်မှာ နေရာတစ်နေရာကို အပိုင်စားရယူထားသူပါ။
နောက်တန်း – ဒီလိဂ် De Ligt (အေဂျက်စ်)
ပွဲတစ်ပွဲကို အကောင်းဆုံး သုံးသပ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အပြင် နောက်ခံလူတစ်ဦးဖြစ်ပေမယ့် Ball Passing Skill ၊ Composure စတဲ့ အရည်အသွေးနဲ့ ပြည့်စုံသူပါ။ ဒီရာသီ ဒတ်ခ်ျပြည်တွင်းလိဂ်မှာ ဒီလိဂ်ရဲ့ တစ်ပွဲပျမ်းမျှ ဘောလုံးပေးပို့တဲ့အကြိမ်က (၆၇.၁)ကြိမ် ရှိခဲ့ပြီး တိကျတဲ့ ဘောလုံးပေးပို့မှု ရာခိုင်နှုန်းက (၉၁.၄)ရာခိုင်နှုန်အထိ ရှိတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်သေးပေမယ့် Aerial Challenge တွေမှာ အသာစီးရယူလေ့ရှိသူပါ။
နောက်တန်း – အလက်ဇန္ဒားအာနိုးလ် Alexander Arnold (လီဗာပူးလ်)
အသက် (၂၀)နှစ်အရွယ်သာရှိသေးပေမယ့် လီဗာပူးလ်အသင်းအတွက် ပွဲ(၆၀)နီးပါး ကစားထားသူ အလက်ဇန္ဒားအာနိုးလ်ဟာ တစ်ချိန်ချိန်မှာ ကမ္ဘာ့အဆင့် ညာနောက်ခံလူဖြစ်လာဖို့ အရှိန်ယူနေပါပြီ။ သူ့ရဲ့ အကြီးမားဆုံး အရည်အသွေးက ဘောလုံးပေးပို့မှု တိကျကောင်းမွန်တာဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ တိကျသေချာတဲ့ ဖြတ်တင်ဘောတွေက လီဗာပူးလ်အသင်းအတွက် အကျိုးအများကြီးရှိစေတယ်။
ဒါကတော့ sportskeeda.com က ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ လူငယ်ကစားသမား (၁၁)ဦးထဲက (၅)ဦးကို အရင်ဦးဆုံး ဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ (၆)ဦးကို အပိုင်း(၂)အဖြစ် ဆက်လက်ဖော်ပြသွားဦးမှာပါ . .
Photo:MondoFutbol,Getty Images,The Independent,De Telegraaf,
အခုနောကျပိုငျး မျောဒနျဘောလုံးလောကမှာ ရစေီးကွောငျး ပွောငျးလဲလာခဲ့ပွီး နာမညျကွီး ကစားသမားတှထေကျ အရညျအသှေးမွငျ့ လူငယျကစားသမားတှကေ နရောပိုယူလာကွတယျ။ ရာသီတိုငျးမှာ ထိပျတနျးအဆငျ့ရှိတဲ့ လူငယျကစားသမားတှေ အမွဲလိုလိုထှကျပျေါလရှေိ့ပွီး ဥရောပထိပျသီးအသငျးမှာ ကစားနတေဲ့ လူငယျလေးတှအေတှကျ ပုံမှနျကစားခှငျ့ရဖို့ဆိုတာက ကွီးမားတဲ့ စိနျချေါမှုပါပဲ။ ဒီရာသီ ဥရောပထိပျသီးလိဂျတှမှော နရောအလိုကျ ခွစှေမျးပွနတေဲ့ အသကျ(၂၃)နှဈအောကျ ကစားသမားတှကေို နာမညျကွီး sportskeeda.com က ရှေးခယျြခဲ့တာကို Akhayar Sports ပရိသတျတှေ သိရှိနိုငျအောငျ ဖျောပွလိုကျပါတယျ . . . .
ဂိုး – လာဖှနျ့ Alban Lafont (ဖီအိုရငျတီးနား)
အသကျ (၁၆)နှဈအရှယျကတညျးက တူးလူးအသငျးအတှကျ ပှဲထှကျကစားခှငျ့ရခဲ့ပွီး ပွငျသဈလီဂူးရဲ့ အသကျအငယျဆုံး ဂိုးသမားအဖွဈ သတျမှတျခံထားရသူပါ။ ပွီးခဲ့တဲ့နှရောသီ အပွောငျးအရှဈေ့ေးကှကျမှာ ဖီအိုရငျတီးနားအသငျးကို ပွောငျးရှခေဲ့တဲ့ လာဖှနျ့ဟာ ဥရောပရဲ့ အကောငျးဆုံး လူငယျဂိုးသမားတှထေဲမှာ တဈဦးအပါအဝငျ ဖွဈပါတယျ။
နောကျတနျး – လူးကပျဈဟာနနျဒကျဇျ Lucas Hernandez (အကျသလကျတီကို)
ပွီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားတုနျးက ပွငျသဈအသငျးနဲ့အတူ ခွစှေမျးပွခဲ့တဲ့ ဘယျနောကျခံလူ လူးကပျဈဟာနနျဒကျဇျဟာ အသကျ(၂၂)နှဈအရှယျသာ ရှိသေးလို့ နောကျထပျ အမြားကွီးတိုးတကျလာဦးမယျ့ အနအေထားပါပဲ။ သူ့ရဲ့ခွစှေမျးကွောငျ့ အကျသလကျတီကိုနညျးပွ ဆီမွှနျနီ Diego Simeone ဟာ ဘယျနောကျခံလူအဖွဈ ဟာနနျဒကျဇျကို သုံးရမလား၊ ဖိလဈပီလူးဝဈ Filipe Luis ကို ဦးစားပေး အသုံးပွုရမလားဆိုတာ ခေါငျးခဲနရေတယျ။
နောကျတနျး – ဂြိုးဂိုးမကျဇျ Joseph Gomez (လီဗာပူးလျ)
၂၀၁၅၊ အောကျတိုဘာလတုနျးက ပွငျးထနျတဲ့ ဒဏျရာရရှိခဲ့လို့ ကာလအတျောကွာ အနားယူခဲ့ရပမေယျ့ ဂိုးမကျဇျဟာ ပွငျးထနျတဲ့စိတျဓာတျ၊ မလြော့သော ဇှဲလုံ့လတို့နဲ့အတူ ပွနျလာနိုငျခဲ့တယျ။ အသကျ(၂၁)နှဈသာ ရှိသေးပမေယျ့ အသကျနဲ့မလိုကျအောငျ ခွစှေမျးပွနတေဲ့ ဂိုးမကျဇျဟာ လီဗာပူးလျအသငျး ခံစဈမှာ နရောတဈနရောကို အပိုငျစားရယူထားသူပါ။
နောကျတနျး – ဒီလိဂျ De Ligt (အဂေကျြဈ)
ပှဲတဈပှဲကို အကောငျးဆုံး သုံးသပျနိုငျစှမျးရှိတဲ့အပွငျ နောကျခံလူတဈဦးဖွဈပမေယျ့ Ball Passing Skill ၊ Composure စတဲ့ အရညျအသှေးနဲ့ ပွညျ့စုံသူပါ။ ဒီရာသီ ဒတျချြပွညျတှငျးလိဂျမှာ ဒီလိဂျရဲ့ တဈပှဲပမျြးမြှ ဘောလုံးပေးပို့တဲ့အကွိမျက (၆၇.၁)ကွိမျ ရှိခဲ့ပွီး တိကတြဲ့ ဘောလုံးပေးပို့မှု ရာခိုငျနှုနျးက (၉၁.၄)ရာခိုငျနှုနျအထိ ရှိတယျ။ ခန်ဓာကိုယျသေးပမေယျ့ Aerial Challenge တှမှော အသာစီးရယူလရှေိ့သူပါ။
နောကျတနျး – အလကျဇန်ဒားအာနိုးလျ Alexander Arnold (လီဗာပူးလျ)
အသကျ (၂၀)နှဈအရှယျသာရှိသေးပမေယျ့ လီဗာပူးလျအသငျးအတှကျ ပှဲ(၆၀)နီးပါး ကစားထားသူ အလကျဇန်ဒားအာနိုးလျဟာ တဈခြိနျခြိနျမှာ ကမ်ဘာ့အဆငျ့ ညာနောကျခံလူဖွဈလာဖို့ အရှိနျယူနပေါပွီ။ သူ့ရဲ့ အကွီးမားဆုံး အရညျအသှေးက ဘောလုံးပေးပို့မှု တိကကြောငျးမှနျတာဖွဈပွီး သူ့ရဲ့ တိကသြခြောတဲ့ ဖွတျတငျဘောတှကေ လီဗာပူးလျအသငျးအတှကျ အကြိုးအမြားကွီးရှိစတေယျ။
ဒါကတော့ sportskeeda.com က ရှေးခယျြခဲ့တဲ့ လူငယျကစားသမား (၁၁)ဦးထဲက (၅)ဦးကို အရငျဦးဆုံး ဖျောပွလိုကျတာဖွဈပါတယျ။ ကနျြတဲ့ (၆)ဦးကို အပိုငျး(၂)အဖွဈ ဆကျလကျဖျောပွသှားဦးမှာပါ . .